Maxaa kusoo kordhay Xaaladda Boosaaso? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa kusoo kordhay Xaaladda Boosaaso?
Deni ayaa Todobaad kahor xilka ka qaadey Maxamuud Cismaan Diyaano, oo xilka ka dhaxlay walaalkiisa Asad Diyaano oo doorashadda Madaxweynaha Puntland u tartamay 2019.
BOOSAASO, Puntland - Xaaladda Boosaaso ayaa wali kacsan, oo aan caga badan ku taagnayn amniga ka jira, iyadoo ay isku hor-fadhiyaan magaaladda Labo Ciidan oo iska soo horjeeda.
Wariye ku sugan Boosaaso, oo la hadlay Keydmedia ayaa sheegay in Agaasimaha hay’adda PSF Jeneraal Amiin Xaaji Kheyr uu Maanta xarunta Taliska PSF kusoo dhaweeyay Agaasime ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ilig iyo Cabdirisaaq Cali Duulane (Garaadka) oo garabka Maxamuud Cismaan Diyaano kasoo goostay.
Agaasimaha PSF oo la socdey Guddomiyaha Maxkamada Ciidanka Puntland iyo saraakil ka tirsan PSF iyo Daraawishta ayaa yeeshay kulan looga hadlay Xaalada guud ee Boosaaso, oo mudooyinkii dambe ka jirtay casbi dagaal iyo dhaq-dhaqaaqyo military.
Xaaladda ayaa mar qura is-bedeshay kadib markii Deni todobaad kahor uu xilka ka qaadey Maxamuud Cismaan Diyaano, oo xilka ka dhaxlay walaalkiisa Asad Diyaano oo doorashadda Madaxweynaha Puntland u tartamay Jan 2019.
Maxay tahay PSF?
Waa Hay'ad la dagaalanka argagaxisadda qaabilsan oo Mareykanka uu maal-geliyo, taasoo la aas-aasey xiligii C/llaahi Yuusuf, waxaana xarunteedu tahay Boosaaso oo ah xarunta Ganacsiga Puntland, oo ku taalla dekadda dhaqaalaha ugu badan kasoo galo Maamulka fadhiya Garowe.
Tan iyo aas-aaskeeda waxaa PSF ka macaashayay reerka Cismaan Diyaanno, oo ahaa ninkii ugu horeeyay oo hay'adda agaasime ka noqdey, kaasoo ku wareejiyay wiilkiisa Asad Diyaanno, oo isaga ku wareejiyay walaalkiisa hadda xilka laga qaadey.
Hay'addan hanaanka dhismaheeda wuxuu la kamid yahay midka NISA, oo aan ku jirin sharuucda Baarlamaanka ansixiyo, waxayna ka madaxbanaanayd taliskeeda iyo shaqadeeda maamulka Deni, oo hadda doonaya inuu ka dhigo hay'adda dowladda leedahay, oo lamid ah kuwa kale sida Booliska iyo Daraawiishta.